कहिले आउँदैछ चीनबाट खोप ? – Action Media
३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले जून महीनाको पहिलो साताभित्र चीनबाट भेरोसेल खोप ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मार्फत चिनियाँ पक्षलाई पत्राचार समेत भईसकेको उच्च सरकारी स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
Prevभारतले बनायो कोरोनाको ‍औषधि, आज सार्वजनिक गर्दै
Nextखोइ चिनियाँ सिलिन्डर ? सांसदले लगे !